व्लादिमीर Mikhailovich Rodzianko नाम संसारमा हुन प्रयोग जो अर्थोडक्स चर्च को बिशप अमेरिका, - धेरै उल्लेखनीय व्यक्तित्व Rodzyanko Vasily थियो। उहाँले मे 22, 1915 परिवार सम्पत्ति मा जन्म भएको थियो, सुन्दर नाम "आनन्द", Ekaterinoslav प्रान्त मा, Novomoskovsk जिल्ला स्थित थियो ल्यायो।
आफ्नो बुबा, Mihail Mihaylovich Rodzyanko, उहाँले मास्को विश्वविद्यालय स्नातक, एक शिक्षित मानिस थिए, तर आफ्नो हजुरबुबा, Mihail Vladimirovich Rodzyanko, त्यसपछि रूसी साम्राज्य के थियो मा अझै III-rd को अध्यक्ष र राज्य Duma को चतुर्थ-औं थियो। त्यो त 1917 को फेब्रुअरी क्रान्ति नेताहरू एक भए र राज्य Duma को अस्थायी समिति नेतृत्व। यो वास्तवमा आफ्नो नाति को भाग्य धेरै महत्वपूर्ण भूमिका प्ले, तर पछि यो।
Ioann Meyendorf (1926 - -। 1992), अमेरिका मा अर्थोडक्स चर्च (न्यूयोर्क, ख्रीष्टको चर्च मुक्तिदाता) मा सेवा गर्ने भविष्यमा बिशप को आमा Baroness Meyendorff, पहिले नै एक presbyter थियो यसको दौड मा née थियो।
पोस्ट-क्रान्तिकारी अवधिमा, 1920 मा, सारा परिवार Rodzyanko किनभने आफ्नो हजुरबुबा मृत्यु, सुनाइसकेको थियो त्यसैले चाँडै तिनीहरूले रूस छोडेर युगोस्लाभिया भविष्य (1929) मा बसोबास गर्न बाध्य भए।
व्लादिमीर लागि तिनीहरूले भयानक वर्ष थिए, तर छोराछोरीको स्मृति उहाँलाई लागि धेरै महत्त्वपूर्ण घटना अंकित - Anapa मन्दिरमा गएर। उहाँले पनि छ वर्ष को उमेर मा उहाँलाई लागि, आफ्नो हजुरबुबा Tsar निकोलस द्वितीय दिनुभएको विश्वास गर्ने अभिभावक, एक पूर्व सेतो अधिकारी, तोकिएको थियो सम्झे। यो embittered र लिएको बदलाको अभिभावक एक सख्त पर्यवेक्षक मा गरियो। , अन्त मा, केटा जीवनमा सबै चासो हराएको उहाँले सकेजति रूपमा उहाँले बच्चा mocked।
एक सानो व्लादिमीर बेलग्रेड मा स्नातक, हुर्केका, रूसी-सर्बियन जिम (1933), र सोही वर्ष मा Theological संकाय मा विश्वविद्यालय बेलग्रेड को अध्ययन गर्न गए। को fates उर्दी आफ्नो संरक्षक, महानगरीय एंथनी (Khrapovitsky) भयो रूपमा। 1926 Hieromonk यूहन्ना (Maximovich) मा जानकारी एक महान आध्यात्मिक प्रभाव छन्।
उहाँले धर्मशास्त्र मा एक डिग्री (1937) संग विश्वविद्यालय बेलग्रेड को त स्नातक। पुजारी को छोरी पनि सोभियत संघ देखि बच गर्ने - उहाँले मरियम Vasil Kolyubaevoy विवाह पछि।
उहाँले विश्वविद्यालय उहाँले एक थियोसिस लेखन थाले जहाँ लन्डन, को मा आफ्नो पढाई जारी राखे। 1939 मा स्नातक पछि, त्यो रूसी धर्मशास्त्र मा व्याख्यान गर्न अक्सफोर्ड निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर युद्ध र व्लादिमीर उहाँले नोभी परमेश्वरको व्यवस्था स्कूल दुःखद सिकाउन थाल्नुभयो जहाँ युगोस्लाभिया, फर्कन बाध्य भएको थियो।
को ROCOR पहिलो Hierarch - को पुजारीको पहिलो रैंक मा Deacon Rodzianko महानगरीय Anastasius (Gribanovsky) द्वारा 1940 मा समर्पित छ। एक वर्ष पछि, बेलग्रेड मा, पुजारी को मर्यादा उहाँलाई कुलपिता Serbskiy Gavriil नियुक्त, र उहाँले Novi Sad मा स्कूल मा सर्बियन इलाकाका मा सेवा सुरु गर्दा त्यो हो। त्यसपछि Vojvodina (सर्बिया) को गाउँमा एक पुजारी थियो, त्यो रातो क्रस को सचिव रूपमा सेवा गरे।
तर द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुवात संग, अर्थोडक्स मसीहीहरूले भयानक reprisals गर्न subjected थिए। बिशप तुलसी Rodzianko सर्बियाई प्रतिरोध भाग लिए र सर्बियन् यातना शिविरमा मुक्त गर्नु मदत गरे। उहाँले पनि युक्रेनी अनाथ केटी अपनाउने।
जब, युगोस्लाभिया पावर लागि युद्ध, को कम्युनिस्टों आए पछि, रूसी emigrants फेरि सबै दिशामा हतारिएको, तर सबै भन्दा रूस मा आफ्नो घर फर्कन चाहन्थे।
1945 मा बुबा तुलसी Rodzianko पत्र लेखे Alexy कुलपिता रूस मा सेवा गर्न आफ्नो इच्छा को बताएको म। तर आफ्नो फिर्ती ठाउँ लिन छैन। किनभने यो समयमा युगोस्लाभिया र सोभियत संघ, र रूसी आप्रवासी बीच निकै soured सम्बन्ध दमित। 1949 मा Rodzyanko Vasily "अवैध धार्मिक प्रचार" को लागि जेल मा 8 वर्ष सुनाइसकेको थियो (उहाँले मन्दिरमा चमत्कारी ढंगमा प्रतीक अद्यावधिक गवाहीलाई आरोप थियो)।
1951 मा, त्यो प्रारम्भिक जारी भएको थियो, र उहाँले त्यसपछि 1946 मा युगोस्लाभिया छाडेका आमाबाबुले बस्ने पेरिस, आफ्नो परिवारका साथ सारियो।
तुलसी Rodzianko: कुराकानी र प्रवचन
1953 द्वारा उहाँले लन्डन सारियो र सर्बियाली अर्थोडक्स चर्च को अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत थियो जो सावा को गिरजाघर, दोस्रो पुजारी भयो। Rodzianko त्यसपछि प्रसारण निगम बीबीसी मा-सागर मा कामको लागि पर्खेको। 1955 देखि, धार्मिक प्रसारण को आफ्नो प्रस्ताव अनुसार सोभियत संघ र पूर्वी युरोप खोलिएको थियो।
को सेन्ट Sergius Theological संस्थान मा - Rodzyanko Vasily विभिन्न रेडियो प्रवचन र कुराकानी मा धेरै प्रदर्शनमा उहाँले विश्वविद्यालय ओक्सफोर्ड को सिकाउनुभयो र पेरिस गरे।
पत्नी मृत्यु 1978 को प्रारम्भिक वसन्त मा, त्यो एक कार दुर्घटनामा नाति इगोर मा मृत्यु भएको थियो। एक वर्ष पछि, त्यो रेडियो स्टेशन बीबीसी बीबीसी बायाँ र (Vasiliya Velikogo को सम्मान मा) तुलसी नामको भिक्षु, यो लण्डन Sourozh को महानगरीय को नेतृत्व अन्तर्गत भयो भयो। उहाँले गोप्य को monastic कमाल पूरा गर्न चाहन्थे र माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation जान थियो, तर उहाँले अमेरिका मा अर्थोडक्स चर्च को Vicar बन्न आग्रह गरियो।
जनवरी 1980 मा, त्यो Rodzyanko Vasily सेवा गर्न थाले जहाँ सेन्ट निकोलस गिरजाघर, मा वाशिंगटन मा, यो बिशप समर्पित।
1984 मा, पुरानो उमेर यसलाई निकाल छ। उहाँले, वाशिंगटन बस्थे सेन्ट निकोलस गिरजाघर को एक मानार्थ rector गरिएको थियो। आफ्नै सानो घर थियो पवित्र प्रधान दूत प्रसारण केन्द्र निर्देशक रूपमा उहाँले काम गरे, र पनि seminaries सिकाइएको र रेडियो छालहरू को स्थानान्तरण "रेडियो भेटिकन", "अमेरिका को आवाज" र अरूलाई नेतृत्व।
वाशिंगटन मा, Rodzianko को अन्तिम दिन अर्थोडक्स आप्रवासी को धेरै नम्बर एक साँचो आध्यात्मिक बुबा, थियो सम्म पनि seminarnye कक्षाहरू पूर्वी मसीही चर्च को इतिहास अध्ययन गर्ने प्रोटेस्टेंट, संग, किनभने उहाँले Orthodoxy गर्न नेतृत्व आफ्ना श्रोताहरूलाई यस धेरै को बिताए।
तुलसी Rodzianko: पुस्तक
मात्र 1981, बिशप Rodzianko बल्ल सोभियत संघ, उहाँले व्यक्तिगत आफ्नो breastfed radiopropovedyami भाइ संग भेट कहाँ मा आइपुगेको छ जब मा। त्यसपछि घर पिता तुलसी Rodzianko मा केही थप समय आयो। कुराकानी उहाँले गहिरो र जीवित थियो, रूसी समाज र चर्च मा के भइरहेको थियो निकै चासो थियो।
यो एक धेरै दयालु र सहानुभूति व्यक्ति, एक सानो Eccentric र नम्र, मानिसहरूलाई प्रेम यो एक विशेष मर्यादा र शुद्धि महसुस किनभने थियो।
1992 मा उनले लघु एस्केन्सन को मास्को चर्च, Nikitskaya सडक मा स्थित एक मानार्थ rector भयो।
आधा बारेमा म सेन्ट Sergius को त्रिएकको Lavra, पिता तुलसी Rodzianko बस्थे। "ब्रह्माण्डको को पतन," वा बरु, "ब्रह्माण्डको पतन र पिता को विश्वास को सिद्धान्त" - ज्ञात काम 1996 मा उहाँलाई द्वारा लिखित।
1998 मा, Rodzianko अचानक नै घर एक प्रवचन लागि (सेवा मा आयोजित थियो बोल्छ THEODORE गिरजाघर Tsarskoye Selo)। उहाँले आफ्नो बगालको बाहिर गए, र आफ्नो हजुरबुबा, मिखाइल Vladimirovich, सधैं रूस लागि मात्र राम्रो चाहन्थे, तर उहाँले हरेक कमजोर मानिस जस्तै पनि fallible थियो बताए। आफ्नो घातक गल्ती उहाँले Tsar निकोलस द्वितीय गर्न अधित्याग अनुरोध संग संसद को आफ्नो सदस्य पठाएको थियो। र अचानक सबै आफूलाई र आफ्नो छोरा लागि कागजात हस्ताक्षर भएको अस्वीकार भनेर। Rodzyanko हजुरबुबा यो बारेमा फेला, र त्यसपछि कडुवाहट रोए र म अब रूसी अन्त बुझे। को येकाटिरिनबर्ग शोकमा उहाँले मात्र एक unwitting दोषी नही थियो। तथापि, involuntary पाप - यो अझै पनि पाप हो। को प्रवचन को अन्त मा, बिशप तुलसी Rodzianko आफूलाई र सारा रूस र शाही परिवार अघि आफ्नो हजुरबुबा लागि क्षमा मागे। र परमेश्वरले उहाँलाई दिइएको शक्ति, उहाँले क्षमा र नगरिएका पापबाट आफ्नो हजुरबुबा अनुमति दिएको छ।
धेरै गाह्रो र कठिन Rodzyanko नाटो सेना द्वारा युगोस्लाभिया को विस्फोट, अनुभव। उहाँले यस भन्छिन् कसरी सोध्दा, उहाँले भने रूस बमबारी थिए। यी घटनाहरू पछि, तुलसी कडा surrendered र तल आए।
आफ्नो मृत्यु अघि दुई हप्ता पनि कुराकानी को एक समयमा, त्यो कठिन हुनेछ कि, खुट्टा पकड छैन भने, यो liturgy बसिरहेका गर्न छ, र तपाईं बस्न सक्छ जब छैन, deacons यसलाई समर्थन र परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा उहाँले पनि सहभागिता लिए।
मृत्युको कारण हृदय गिरफ्तारी को प्रभु थियो। उहाँले वाशिंगटन मा सेप्टेम्बर 17 विश्राम, 1999। को अन्त्येष्टि 23 सेप्टेम्बर मा भयो। वाशिंगटन मा सेन्ट निकोलस गिरजाघर मा आफ्नो अन्त्येष्टि तीन Bishops। यो उल्लेखनीय मानिसलाई बोली विदाई पादरीहरूले र विश्वासी मानिसहरू को एक ठूलो संख्या आएको छ। उहाँले अर्थोडक्स विश्वासीहरूलाई लागि साइट मा, वाशिंगटन रक क्रिक मा चिहान मा गाडे। यसरी आफ्नो लामो र धार्मिक बाटो पिता तुलसी Rodzianko समाप्त भयो।
आज, परमेश्वरको मान्छे को एक महान उपहार बिशप तुलसी आफ्नो भाग्य र जीवन बारे धेरै कुरा जो, प्रभु को पुस्तक द्वारा मंचन फिल्म "मेरो भाग्य" थियो।
उहाँले पनि उल्लेखनीय पुस्तक "अपवित्र सन्तहरू" द्वारा लिखित को टाउको को लागि समर्पित थियो , Archimandrite Tihonom Shevkunovym उहाँले व्यक्तिगत ज्ञात थियो कोसँग। त्यहाँ उहाँले कहीं देर 80 का तिनीहरूले कोस्ट्रोमा पुरानो सोभियत-अमेरिकी युवा शिविरमा को Diocese द्वारा आयोजित गर्न जाँदा, एक अद्वितीय मामला वर्णन गर्दछ। पछाडि सडक को Crossroads तिनीहरू एक भयानक दुर्घटना देखे र रोकियो। एक पल्टाइदिनुभयो मोटरसाइकल चालक नजिकै सडकको मध्य मृत झूट र सडक छेउमा एक ट्रक थियो। मरेका अर्को आफ्नो छोरा थिए। प्रभु आए र आफ्नो पिता बप्तिस्मा वा विश्वासीहरूलाई थियो कि बारे सोधे, त्यो चर्च बुबा जान गर्नुभयो, तर अक्सर लन्डन बाट प्रवचन संग कार्यक्रम सुन्न, जवाफ र मात्र व्यक्ति उहाँले सधैं विश्वास थियो भने, Rodzyanko थियो । बुबा Vasily Rodzianko भन्नुभयो - यो यो छ। जस्तै सबै अरूलाई साक्षी दुर्घटनामा भेला छोरा, दूर Blown थियो। यसैबीच, पिता तुलसी को मरिरहेका लागि प्रार्थना पढ्न थाले र मृतक लागि एक स्मारक सेवा concelebrated।
आफ्नो पैतृक उहाँले प्रवचन को प्राण मुक्तिका लागि धेरै धेरै उपयोगी बायाँ र जीवन र बिशप तुलसी को आध्यात्मिक अनुभव सम्झनाहरु पुस्तक "उद्धारको प्रेम" र "मेरो भाग्य" मा गरे।
कति को कुरान को पद र कति पद? कुरान - मुस्लिम पवित्र पुस्तक
को साना Georgia मा चर्च। मास्को मा चर्च: ठेगाना
बच्चा बप्तिस्मा गर्न चाहे र यो आवश्यक
अपार्टमेंट मा छत खत्म लागि र देश मा विकल्पहरू
Risotto: कसरी तयार
Spinnaker जहाँ सेट? एक जहाजयात्रा मा Spinnaker के हो?
पत्नीहरूको सम्पत्तिको विभाजनमा सम्झौता: नमूना। पत्नीहरूको सम्पत्तिको विभाजनमा सम्झौता: कसरी गर्ने?